Maamulka degmada Kaxda oo shaaciyey xog ku aadan dilka ABWAAN BEDDEL - Caasimada Online
Home Warar Maamulka degmada Kaxda oo shaaciyey xog ku aadan dilka ABWAAN BEDDEL
Muqdisho (Caasimada Online) – Allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay Marxuum Abwaan Beddel Jaamac Xirsi oo ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee Soomaaliyeed, kaas oo xalay lagu dilay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir.
Marxuumka ayaa waxaa toogasho ku dilay rag ku hubeysnaa Bistoolado, kuwaas oo goobta ka baxsaday, xilli ay ku beegneyd afurkii, gaar ahaan mar laga soo baxay Salaaddii Maqrib.
Guddoomiyaha maamulka degmada Kaxda Maxamed Yuusuf oo ka qayb-galay Aaska ayaa ka hadlay dilka Abwaanka, wuxuuna tacsi u diray ehellada iyo Ummadda Soomaaliyeed.
“Runtii waa geeri aad u xanuun badan, waana uga tacsiyeyneynaa qaraabada, ehellada iyo guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed,” ayuu yiri guddoomiye Maxamed Yuusuf.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay ku raad joogaan raggii ka dambeeyey dilka loo geystay Abwaan Beddel Jaamac, isla-markaana ay hayaan xogtooda, ayna gacanta kusoo dhigi doonaan, si loo horgeeyo maxkamadda, loogana qaado tallaabo waafaqsan sharciga.
“Waxaan caddeyneynaa Abwaan Bedal gacantii dishay, haddii Ilaahey raalli ka noqdo in lagu tegi doono. Raadad ayaan heynaa, xogo ayaan heynaa waana ku tegi doonaan,” ayuu nar kale yiri guddoomiyaha maamulka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir.
AUN Beddel Jaamac Xirsi ayaa caan ka ahaa magaalada Muqdisho, wuxuuna aad uga hadli jiray arrimaha siyaasadda iyo xaaladaha taagan, isaga oo kasoo muuqan jiray warbaahinta.
Si kastaba, dilkiisa ayaa qayb ka noqonaya falal ammaan darri oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayey magaalada Muqdisho, xilli lagu jiro xaalad kala guur ah & marxalad doorasho.